Translate Myanmar (Burmese) to Indonesian | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Indonesian, Myanmar (Burmese) to Indonesian translations, Myanmar (Burmese) to Indonesian Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Halo apa kabarmu
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Apa ada seseorang?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Aku sangat mencintaimu
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Berapa biaya hamburger ini?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Bisakah kamu memanggilku taksi?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး aku minta maaf
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို saya tertarik
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Penerbangan saya tertunda
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Saya di sini untuk bisnis
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Halo, namaku adalah
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Saya minta maaf, tapi saya sudah menikah
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Saya ingin bertanya kepada Anda
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Bisakah kamu mengantarku ke bandara?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Apa waktunya sekarang?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Dimana kantor polisi terdekat?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Dapatkah saya meminjam charger telepon Anda?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Bisakah kamu membantuku?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Order meadrink, please?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Berapa biayanya?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Saya alergi terhadap gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Hubungi dokter
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Apakah ada dokter
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Dapatkah saya menelepon?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Panggil aku atasanmu
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Tempat ini sangat bagus
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Bawa saya ke hotel
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Berapa nomor kamar saya?